Mowjadda kuleylka ee jabisa diiwaannada Spain: gobollada ay saameeyeen iyo goorma ayay dhammaanaysaa | Saadaasha Hawada
Mowjadda kulaylka ee jabisa diiwaannada Spain: gobollada ay saameeyeen iyo markay dhammaato
Emilio Garcia | 18/08/2021 08:49 | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Mawjadaha kuleylka
Mawjado kulayl ah oo ayaa gaaray 50 digrii Celsius meelo badan oo Spain ah Waxay noo reebtay muuqaal muuqaal ah oo aynaan arkin sanado. Qeybo ka mid ah Spain, sida Andalusia, gobollo badan ayaa gaaray tirooyinka kuleylka daran.
Dalkeenu caadi ahaan waa waddan kulul, dabcan, laakiin waxa maalmahan ina soo wajahaya waa in si kasta loo jebiyaa diiwaannada. Intii lagu gudajiray qoraalkan waxaan sii faahfaahin doonnaa waxyar oo dheeraad ah sida aan uga gudubno mowjadda kuleylka ee Spain, diiwaannada aan ku jabinay iyo dhammaanba, waxaan bixin doonnaa qaddar wanaagsan talooyin si aad si fiican ugu gudubto kulaylka xad dhaafka ah in aan maalmahan ku noolnahay Spain.
1 Waa maxay macnaha kulaylka ee Spain
2 Goorma ayuu dhammaadaa mawjadda kulaylka ee Spain?
3 Talooyinka mawjadda kulaylka
Waa maxay macnaha kulaylka ee Spain
Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, oo sidoo kale loo yaqaan Aemet, ayaa noo reebtay xog aanan muddo dheer gaarin bulshooyinka iyo gobollada kala duwan ee Isbaanishka. Sida aan ku aragnay baloogga khabiirka cimilada ee caanka ah, César Rodríguez Ballesteros, oo ka tirsan Bangiga Qaranka ee Xogta Cimilada ee Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Dawladda Spain, Sabtidii la soo dhaafay waxaan gaarnay diiwaanno qaran oo kala duwan:
Marna ka hor maanaan gaarin heerkulka celcelis sare ee Spain, 37,77 darajo.
Jimcihii 13 -keedii wuxuu galay barxadda wuxuuna galay kaalinta saddexaad marka la eego heerkulka celceliska qaranka oo leh diiwaanka 36,92 digrii.
Oo waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay waxa maalintii ugu kululayd qaran ahaan Spain. Gaar ahaan, waa inaan dib ugu noqonnaa Ogosto 10, 2012 oo leh heerkul dhexdhexaad ah 37,87 darajo Celsius gudaha Spain.
Goorma ayuu dhammaadaa mawjadda kulaylka ee Spain?
Waxay u muuqataa in waxoogaa yar mawjadan kulaylka ee Spain ayaa sii yaraanaysa iyo in heerkulku hoos u dhici doono dhawrka maalmood ee soo socda, laakiin waa inaynaan isku kalsoonayn maadaama ay weli saadaalinayaan dhowr maalmood oo kale oo kulayl aad u daran ah oo ka dhici doona gobollo badan.
Waqooyi -bari Spain, heerkulku mar kale aad buu u sarreyn doonaa. Aagga dhexe ee Madrid in badan oo isku mid ah. Oo haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno khariidada koonfurta iyo Jasiiradaha Canary, meelo badan oo ka mid ah aagagga ayaa awoodi doona inay ka sarreeyaan 40 darajo heerkul.
Sababtan awgeed, Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Dawladdu waxay haysaa midabka liinta oo ah tilmaame digniin ah inay weli jiraan 10 gobol oo halis aad u weyn leh. Gobolladaan waa kuwan soo socda: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Seville, Albacete, Almería, Málaga iyo Cuenca.
Intaas waxaa dheer, 10 -kan gobol, waxaan ka helnaa dhowr ay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka faahfaahinayso maadaama inta badan maalmaha ay heli doonaan tilmaame ku jira casaan. Taasi waa, dhammaan gobolladaas aan hadda kuu sheegi doonno inay aad uga badan doonaan heerkulka ay awoodi karaan inay helaan xagaaga kale.
Gobolladaas oo heegan ugu jiri doona sida Aemet ay yihiin gabi ahaanba dhammaan gobollada bulshada Andalusia marka laga reebo Malaga iyo Almería, kaas oo ku sii jiri doona digniinta oranjiga sida aan uga hadalnay faqradda hore.
Talooyinka mawjadda kulaylka
Sidii aan soo sheegnay, mowjadda kuleylka ayaa sii socon doonta dhowr maalmood iyada oo ah wehelka nolosheena Spain. Haddii aad ka mid tahay dadka weli ku sugan gobollada leh tilmaame oranji ah, Aemet waxaan ku talinaynaa talooyin kala duwan si aad si fiican ugu gudubto mawjadan kulaylka.
Qaar badan oo ka mid ah talooyinkan mawjadaha kulaylka ayaa macno samaynaya, laakiin way ka ammaan badan yihiin ka xun. Sidaa darteed, u raac warqadda, maadaama ay lagama maarmaan u yihiin inay ka badbaadaan heerkulka sida kuwa aan la kulanno.
Xitaa haddii aad u malaynayso inay tahay qorraxda oo keliya waxaad ku xanuunsan kartaa kulayl, istaroogga kulaylka iyo hoos u dhaca, dawakhaad iyo astaamo kale oo ay tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga guud. Halkaan waxaan kula soconnaa talooyinka 13 ee aan soo uruurinnay si aad si wanaagsan ugu dhex mari karto mowjadda kuleylka ee Spain:
Iska ilaali inaad baxdo saacadaha ugu kulul
Ha sugin inaad cabto. Had iyo jeer waraabi biyo macaan leh.
Ha cunin cuntooyin aad u waaweyn. Isku day inaad cunto fudud.
Ha cunin kafeyn, sonkor iyo aalkolo tiro ahaan. Way fuuq baxaan adiguna waxaad u baahan tahay mid kaa soo horjeeda.
Ka fogow dhaqdhaqaaqyada isboortiga saacadaha kulaylka ugu badan.
Soo iibsi xiro koofiyad ama koofiyad iyo walxo kale oo ka hortaga kulaylka haddii ay tahay inaad bannaanka u baxdo.
Xir guriga maalintii iyo habeenkii oo dhan wax walba fur.
Isticmaaldaah -furan oo socda.
Hoos u soco
Qubeyso biyo qabow ama diiran.
Hadaad leedahay qaboojiye, si fiican u isticmaal. Ha ku dhaafin badda adigoo ka tagaya heerkul aad u hooseeya. Waxaad ku dhici kartaa istaroog kulayl markaad bannaanka u baxayso.
Ha ogolaan xoolaha saaran baabuurta qorraxda. Mana aha dadka. Hawo -geli.
Haddii aad u malaynayso inaad yeelan karto calaamado istaroogga kulaylka, la tasho dhakhtarkaaga intaadan waxba samayn.
Sidee u nooshahay mawjaddan kulaylka? Ugu dambayntii, haddii aad ku nooshahay meel xeeb ah oo aad fasax ku jirto, si ka fiican sidii hore, sax? Kuwa aan lahayn xeeb, webiga iyo kuwa aan sinaba uga baxsan karin looma hari doono wax aan ka ahayn inay cabbaan biyo macaan oo ay cunaan jalaatada, taas oo aan sidaas u xumayn.
Naga tag faallooyinka maxay yihiin xeeladahaas yar ee aad u isticmaashid inaad si fiican ugu gudubto heerkulka sare sida kuwa aan maalmahan ku noolnahay Spain!
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mowjadda kulaylka ee jabisa diiwaannada Spain: gobollada ay saameeyeen iyo markay dhammaato
Barafka Dhiigga ama barafka cas: waxaan kuu sheegnaa sababta ay u dhacdo
Waa maxay dayax gacmeed